नयाँ पत्रिकामा ‘मिस्टर सोलमारी’ को कथा – Media Kurakani
May 30th, 2015 Rabi Raj Baral Media Watch
यो कथा शुक्रबार (२०७२ जेठ १५) को नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।
कथामा कथावाचक बाहेक तीन जना मुख्य पात्र छन्। सुरुमा आउँछन् श्री सुब्बा। अर्थात नाम श्री र थर सुब्बा।
यी पात्रले ‘भूकम्पसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने यन्त्र आविष्कार गरेको’ भन्दै नयाँ पत्रिकामा फोन गरेछन्।
‘आउनुस्, म डेमोसहित तपाईंलाई यन्त्रबारे बताउनेछु।’
पत्रकारलाई समाचार न चाहिन्छ। उनले यति भनेपछि नयाँ पत्रिकाका पत्रकार चिरञ्जीवी पौडेल लागेछन् उनले दिएको लोकेसनतर्फ। यो कथाका कथावाचक पौडेल नै हुन्। कथाको सेटिङ कोटेश्वर चोक नजिकैको एउटा चिया पसल हो।
कथाका दोश्रो पात्र हुन् नीलो क्यापधारी एक भलाद्‍मी। उनले एमेच्योर रिसर्चर/अन्वेषक सुब्बासँग सबालजबाफ गर्छन्।
कथामा तेश्रो पात्र छन्- नयाँ भलाद्‍मी। उनी कथाको मध्यान्तरतिर ‘ह्वास्स मदिराको गन्धसहित’ भीडमा प्रवेश हुन्छन्। कथावाचक उनलाई मिस्टर सोलमारी भन्छन्। उनको प्रवेशपछि कथावाचक पाठकलाई सोध्छन्- के कथाले नयाँ मोड लिन लागेको हो?
तर कथाले नयाँ मोड भने लिँदैन। मिस्टर सोलमारी जसरी आउँछन्, त्यसरी नै फर्किन्छन्। तर उनका कुरा भने खुब रोचक छन्।। अरु गौण पात्रहरु पनि छन् कथामा।
कोटेश्वरको चियापसलमा कथावाचकलाई लगिसकेपछि मुख्य पात्रले यन्त्रको साइरन बजाउँछन्। आखिर उनलाई यन्त्रको परीक्षण न गर्नु थियो। ‘ठूलो आवाजमा साइरन बजेपछि वरपरिका घरबाट मानिसहरू कुदाकुद गर्दै आए। एउटा कोणसभा गर्न मिल्ने ३०–४० जना मानिसको भीड जम्मा भइदियो। सुब्बा पनि प्रफुल्लित बन्दै नेताको स्टाइलमा लामो भूमिकासहित भाषण दिन थाले।’
कथा यसरी अघि बढ्छ।
कथामा भूकम्पसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने यन्त्र आविष्कार गरेका एमेभ्योर रिसर्चरले आफ्नो सिर्जनाबारे लामो भाषण दिन्छन्।
‘दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु ! आज हामी सबैजना भूकम्पको त्रासमा बाँचिरहेका छौँ। यसको निराकरणका लागि यो मेसिन आविष्कार भएको हो। यो (आविष्कार) कहिले भएको हो भन्दा… आज कति गते?’
भीडबाट आवाज आयो : ‘४ गते (वैशाख)’
‘हो, यो यन्त्र ०७२ साल ३ वैशाखमा आविष्कार भएको हो। विज्ञानले भन्छ, जहाँ आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ आविष्कार हुन्छ। यो आविष्कार पनि त्यस्तै हो ।’
अब बुझ्नुभयो? यो घटना ४ वैशाखको हो। भूकम्प गएको त वैशाख १२ गते हो। के नेपालमा भूकम्प जानुअघि पनि मानिसहरु भूकम्पको त्रासमा बाँचिरहेका थिए?
कथामा १२ गतेको भूकम्पमा पर्खालले किचेर अपरेसन गर्नुपरेका एक बच्चा छन्। सामूहिक रुपमा पालमुनी बसेका मानिसहरु छन्।
कथा स्वभाविक रुपमा अघि बढिरहेका बेला जब भीडबाट आएको ‘४ गते’ जबाफमा कथावाचकले ‘बैशाख’ थपिदिन्छन् त्यसपछि कथाले पाठकलाई पुरै ‘कन्फ्युज्ड’ गराइदिन्छ। 🙂
ब्राकेटभित्रको वैशाख गल्तीले गर्दा परेको पनि हुनसक्छ। बैशाखको ठाउँमा जेठ पनि हुनसक्छ। तर जे होस् नयाँ पत्रिकामा छापिएको मिस्टर सोलमारीको कथा चाहिँ पठनीय छ।
तपाईँ पनि पढ्ने? लिंक यहाँ छ।
Tags Naya Patrika
विवादका बिच टिबिएनको अध्यक्षबाट आरके मानन्धरको राजीनामा »
« लौ, गृहमन्त्री ज्यूलाई पनि कुरीकुरी! प्रेस संयोजक विवादको भित्री कुरा यस्तो रहेछ